Sagantaan og-barruu Islaamaa magaalaa Daseetti gaggeeffamuuf ture dhoorkamuu gabaafame - NuuralHudaa
Londonitti Mu’azzinni Masjidaa ableen dirame
Majlisni Oromiyaa hojiiwwan ji’oota dabran keessa hojjetaman irratti Miidiyaaleef ibsa kennuufi
Lammiileen Iiraan lama dhukkuba Vaayirasii Koronaatiin qabamanii turan du’uu gabaafame
Turkiyaan Kaaba-Lixa Suuriyaa keessatti duula waraana kan geggeessuu maltu tahuu akeekkachiiste
Komishiiniin Filannoo Afgaanistaan Prezdaant Ashiraf Gaanii yeroo lammataatiif injifatuu labse
Ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Maayik Pompiyoo Muummicha Ministeeraa Dr Abiy Ahmad waliin mar’ate
Mariin qophii wixinee sanada waliigaltee hidha laga Abbaay ilaalchisee geggeeffamaa ture waliigaltee malee xumurame
Home/Odeeyfannoo/Sagantaan og-barruu Islaamaa magaalaa Daseetti gaggeeffamuuf ture dhoorkamuu gabaafame
Sagantaan og-barruu Islaamaa magaalaa Daseetti gaggeeffamuuf ture dhoorkamuu gabaafame
Naannoo Amaaraa magaalaa Daseetti sagantaan og-barruu Islaamaa “Minber Multimedia Production” qopheesse, guyyaa har’aa galma Aadaa Walloo kan magaalaa Daseetti gaggeeffamuuf karoorfame ture. Hata’u malee sababa ifatti hin beekaminiin sagantaan kun kan haqame tahuu gabaafame.
Qopheessitootni sagantichaa guyyaa 15 dura ministeera aadaa fi Tuurizimii irraa xalayaa deeggarsaa fudhatuun, Bulchinsa magaalaa Dasee fi akkasumas Waajjira Aadaa fi Turiizimii magaalichaa beeksisuun hayyamni kennameefi ture. Hata’uu malee gareewwan naannicha keessaatti jibbaa Islamummaa leellisan olola dharaa “sagantichi Kan ABO’ti” jedhu eega tamsaasanii booda, hoggantoonni magaalattii sagantaan kun akka hin geggeeffamne kan dhoorkan tahuu odeeyfannoon ni addeessa.
Keeysummoota sagantaa kana irratti hirmachuuf gara magaalaa Daseetti imalan jidduu: hayyuu seenaa Profeesar Aadam Kaamil, walitti-qabaa Koree Furmaata Barbaadduu Hawaasa Muslimaa Ustaaz Abubakar Ahmad, Ustaaz Injinar Badruu Huseen, Dr Samahar Taklee dabalatee munshidoonni fi keeysummoonni birootis jiraatuu beekameera.
Naannicha keessatti gareewwan jibbaa Islamummaa leellisaniin fi hogantoota mootummaa naannichaattin maqaa ABO jedhu maxxansuun, dhiibbaan hawaasa muslimaa irratti geggeeffamu kan hammaataa dhufe yoo tahu, goocha kana dhabsiisuuf mootummaa irraa tarkaanfiin tokkolleen fudhatamuu dhabuun immoo hawaasa muslimaa mufachiisee jira.
Sagantaa har’a dhoorkame kana dabalatee ji’oota lamaan dabran keessa qofa, sababa wal-fakkaataa taheen sagantaan Da’awaa gurguddaan 3 dhorkamuu ni yaadatama.
Magaalaa Deesee Naannoo Amaaraa Sagantaa Da'awaa
rabini isini iraa haa jalatu jzkk
As we wb
I like it you program I follow up all the time
Don’t give up I am with you